Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. जर्ज एचडब्लु बुसको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम विदाई – Emountain TV
एजेन्सी, २० मंसिर । अमेरिकाका ४१ औँ राष्ट्रपति जर्ज एचडब्लु बुसको गएको शुक्रबार राती निधन भएको थियो । उनको पार्थिव शरीर अन्तेष्टी अघि फ्युनेरलका लागि टेक्सासको ह्युस्टनबाट वासिङ्गटन लगिएको थियो । उनका छोरा तथा अमेरिकाका ४३ औँ राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले भावनात्म हुँदै पिताप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन् ।
जुनियर बुसले आफ्ना पितालाई महान मानव र प्रिय पिताका रुपमा सम्झिए । जर्ज एचडब्लु बुसको फ्युनेरलमा जीवित रहेका सबै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिहरु तथा अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थिति थियो ।
सिनियर बुस सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए । उनको पार्थिव शरीर गृह राज्य टेक्सासमा श्रीमती बारबरा नजिकै गाडिने छ । फ्युनेरलमा अमेरिकाको ४३ औँ राष्ट्रपति बनेका उनका छोरा जर्ज डब्लु बुसले आफूलाई पिताले जनताको सेवा महान र अत्यावश्यक कार्य रहेको भन्ने सिकाएको बताए । पिताका लागि दिइएको श्रद्धाञ्जली सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले आफ्नो आँसु रोक्न सकेनन् । उनको गला अवरुद्ध भयो ।
फ्युनेरलमा पूर्व राष्ट्रपतिहरु जिमी कार्टर, बिल क्लिन्टन, जर्ज डब्लु बुस तथा बाराक ओबामा पूर्व प्रथम महिलासहित उपस्थित भएका थिए । यस्तै अहिलेका राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प पनि फ्युनेरलमा सहभागी भए ।
पार्किन्सन रोगबाट ग्रस्त बुश केही वर्ष देखि अस्वस्थ थिए । रगतमा संक्रमण भएपछि अन्तिम समय अप्रिलमा अस्पताल भर्ना भएका थिए । दोस्रो विश्व युद्धका भेट्रान बुस पछि राजनीतिमा आएर राष्ट्रपति बनेका थिए ।
तत्कालीन सोभियत युनियन र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध अन्त्य गर्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । आतंकवादबाट ग्रस्त इराकमा सद्याम हुसेनको शासन अन्त्यका लागि बुसको भुमिका सम्झनायोग्य छ । त्यसो त जर्ज बुशको नाम अमेरिकी इतिहासमा अब्बल मानिन्छ ।